အဆိုပါကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုတွင်ခုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆွစ်ဇာလန် CNC စက်၏အားသာချက်ကဘာလဲ? - တရုတ်ရှန်ဒေါင်းနယူး Ankai-Kitco
ဆွစ်ဇာလန် CNC ခုံစီးရီး
အလျားလိုက်အလှည့ CNC ခုံစီးရီး
ဒေါင်လိုက် Mills CNC ခုံစီးရီး
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုတွင်ခုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆွစ်ဇာလန် CNC စက်၏အားသာချက်ကဘာလဲ?
ဆွစ် CNC စက်အတွက်တိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်နှင့်ကရှုပ်ထွေးသောယာဉ်စက်, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, ငြီးငွေ့စရာ, တစ်ချိန်တည်းမှာထွင်းထုများနှင့်ထွင်းထုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်တိကျ Hardware နဲ့ရိုးတံအထူး-shaped Non-စံအစိတ်အပိုင်းများအသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါလမ်းလျှောက်စက်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစဉ်အလာကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုတွင်ခုံကနေကွဲပြားသောကြောင့်, လမ်းလျှောက်စက်၏စက်ထိရောက်မှုနှင့်စက်တိကျသည့် NC ခုံ၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ကိုအလွန်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရွေ့လျားပေါင်းစုံ tool ကိုဘူတာရုံထပ်နှင့်ချည် chip ကို, ဓားတိုအားဖြင့်စက်ကို tool ကိုမှထိရောက်သော axial ဟာအပြောင်းအလဲနဲ့သံသရာအချိန်, လဲလှယ်အချိန်နည်းလမ်းနဲ့ tool ကိုကယ်တင်တော်မူ၏, ဒီဒီဇိုင်းကို tool ကို၏ biaxial အစီအစဉ်နှင့်အတူဝဒေနာကို ယူ. တိုက်ရိုက်ဗိုင်းလိပ်တံ indexing function ကိုနှစ်ကြိမ် အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းယင်းလေဟာနယ်အချိန်ကိုအတိုကောက်။ chip ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုစိတျအပိုငျး clamping ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ workpiece ရဲ့စက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်စက်တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့ခိုင်ခံ့အာမခံချက်ပေးပါသည်။ စိတျနှလုံးအစက်စျေးကွက်၏အမြင်တွင် 38mm အဆိုပါလမ်းလျှောက်စက်အတွက်တိကျဝင်ရိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ဈေးကွက်၌ကြီးစွာသောအားသာချက်ယူထားသောစေသည်ရာသည်၎င်း၏အကြီးဆုံးအပြောင်းအလဲနဲ့အချင်းဖြစ်ပါသည်။ စက်ကိရိယာဒီစီးရီးကိုလည်းတစ်ခုတည်းစက်ကိရိယာအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုသဘောပေါက်ထားတဲ့အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးကိရိယာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်မကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်လျော့နည်းစေခြင်း, တိကျရိုးအစိတ်အပိုင်းများအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားခုံထက်စက်ထိရောက်မှုနှင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအလွန်အပြောင်းအလဲနဲ့သံသရာအချိန်လျှော့ချကြောင့်နှစ်ဆသောအစီအစဉ် tool ကို၏တစ်ဦးအရည်အသွေးခုန်ခဲ့လျှင်, ဓားတိုအားဖြင့်စက်ကိရိယာတခုအပေါ်ပေါင်းစုံ tool ကိုဘူတာရုံထပ်တူ function ကို tool ကိုဖလှယ်ဖို့အချိန်, ချည်ထားပါတယ် processing အခါနှစ်ဦးကိုအချိန်တိုစေအချိန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်, ထပ်ဖန်ရှင်ရွေ့လျားထိရောက်သော axial ဖြတ်တောက်တိုက်ရိုက်ဗိုင်းလိပ်တံ indexing function ကို။ အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကစက်တိကျမှန်ကန်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိကျသေချာသည့်ဗိုင်းလိပ်တံနှင့် workpiece ရဲ့ clamping တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အမြဲ Machine ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင်စျေးကွက်အတွင်းနှလုံးစက်အများဆုံးစက်အချင်း 38mm ဖြစ်ပြီး, ကတိဝင်ရိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ဈေးကွက်၌ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိပါတယ်။ စက်ကိရိယာဒီစီးရီးတစ်ခုတည်းစက် tool ကို၏အလိုအလျှောက်ထုတ်လုပ်မှုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလျှင်, အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ဆိုးရွားမှုနှုန်းလျှော့ချရန်အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစက်ကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတိကျစွာရိုးအစိတ်အပိုင်းများအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-02-2018
နေရပ်လိပ်စာ: Fuhai လမ်း, ဟန်နျြ့ဘုရငျ့မြို့, Zouping ကောင်တီ, ရှန်ဒေါင်း
ဆွစ်ဇာလန် CNC စက်၏အားသာချက်ကဘာလဲ ...
အသစ် CNC စက် tool ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ရက် ...
Ankai ၏ features အသစ်တွေကိုဝဒေနာယူ
အသစ် SC385 SM203 စက်, Ankai succes ...